IINGCAMANGO EZINGAMA-80 EZIPHAMBILI ZEWAYINI ZEWAYINI-UYILO LWEGUMBI LEVINO - UYILO LWEKHAYA
Iingcamango ezingama-80 eziPhambili zewayini zewayini-Uyilo lwegumbi leVino
Akunyanzelekanga ukuba uzithengele isidiliya sakho ukonwabela unyaka wonke kwesitokhwe sakho sabucala.
Ngokuchasene noko, indawo yokugcina iwayini yakho yindlela yakho eya kwizinto ezintle ebomini, ukuqala ngeglasi ye-vino.
Indawo yokugcina iwayini, okanye amagumbi ewayini, sele enziwe emakhaya ukusukela kwixesha lamaGrike amandulo. Zisakuba zithathelwa ingqalelo njengezityebi kunye nabantu abakumgangatho ophezulu abanokuzifikelela, izisele zewayini ekugqibeleni zanandipha ukusetyenziswa ngokubanzi ngabo banothando olulula lomdiliya. Izisele zewayini zanamhlanje ziyilelwe ngokokungcamla komntu kunye nomthamo, ngezikali ezigcweleyo ezibale ubude begumbi elingaphantsi kunye neemodeli ezincinci ezifanelekileyo ngokulula kwigumbi lekona.
Kulabo bajonge ukufaka indawo yokugcina iwayini kumakhaya abo, kubalulekile ukuba uqale uvavanye indawo yakho ukumisela eyona ilungileyo nexabisekileyo. Nokuba ukhetha ibar ehleliyo, igumbi lokugcina impahla elilula, okanye indawo yokugcina izisele epheleleyo, uya kufuna ukuqinisekisa ukuba uyayigcina kwaye uyayiphunga i-vino yakho kwiimeko ezifanelekileyo. Uyilo lokugqibela luhlala luxhomekeke kwingqokelela yewayini ngokwayo, ethi ibuze imibuzo enje ngokuba ukhetha ifriji ende yewayini okanye igumbi elomileyo elifakwe ngaphandle nelanga. Iimpawu ezongezelelekileyo zinokubandakanya iiglasi zewayini kunye neekhawuntari zokubala, kunye nezikhululo zokungcamla.
Kufika ixesha phantse kuyo yonke impilo yomthandi wewayini apho ukhetho olukhethwe ngononophelo lufanelwe ngaphezulu kwekhabhathi yekhitshi yokugcina nokubonisa. Isisele sewayini yindlela yengcali yokonga nokwabelana ngokhetho lwayo ngendlela eya kuthi kuphela yimbinana ekhethiweyo evela kumaxesha adlulileyo ikwazi ukubuyela umva.
Ibhabhathane elinamaphiko entliziyo
Iitattoo ezincinci zangasemva zabafazi
I tattoo yentliziyo enamagama abantwana
Ngaba isikhwama semali esixabisa ixabiso laso
imibono ye tattoo kunyana wamazibulo
Izimvo zecarport eziqhotyoshelwe endlwini
Iitattoo ze fairies kunye namabhabhathane
izimvo zeyadi ezingenangca
Yokakayi kunye neetattoos zoyilo